Xiriirka cusub ee Taiwan iyo Somaliland oo ka careysiiyay Shiinaha | Keydmedia
Xiriirka cusub ee Taiwan iyo Somaliland oo ka careysiiyay Shiinaha
Somaliland iyo Taiwan ayaan haysan aqoonsi caalami ah, waxaana dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha ula dhaqmaan sida maamullada iyaga katirsan, oo gooni u goosad sharci darro ah doonaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa war kulul ka soo saartay xiriirka iyo si dhex galka cusub ee dhawaan u furmay maamulada aan aqoonsiga caalamiga ah helin ee Taiwan iyo Somaliland oo maalinimadii shalay aheyd si rasmi ah ugu dhawaaqay.
Qoraal kooban oo la soo dhigay bogga Twitter-ka ee Safaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda Shiinaha marna u ogolaaneyn urur ama xisbi siyaasadeed isku daya kala geynta taako ka mid ah dhulka Shiinaha, nooca iyo waqtiga uu rabo ha doonee.
“Qofna u ogolaanmeyno, ha ahaado uruur ama xisbi siyaasadeed oo isku dayaya kala qeybinta dhulka Shiinaha nooca iyo waqtiga uu rabo ha doonee.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya.
Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu xusay inay jirto oo kaliya hal dal oo la yiraahdo Shiinaha, islamarkaana ayTaiwana qeyb ka tahay, taasoo laga aqoonsanyahay caalamka oo dhan.
Shalay ayay ahayd markii ay Tawain sheegtay in ay xafiis ka furaneyso gudaha Somaliland, iyadoo ku tilmaamtay in ay tahay dal madax banana oo ku yaalla geeska Afrika, kaasoo ay kala dhaxeyso jeceyl qoto dheer oo ku dhisan dimuquraadiyad iyo xornima doon.
Ilaa iyo hada dowladda Soomaaliya war kama soo saarin xiriirkaan cusub ee ay Somaliland la yeelaneyso Taiwan.